Wararkii Dibada ee Maanta iyo warqabadka SBC International – SBC
Wararkii Dibada ee Maanta iyo warqabadka SBC International
Washington oo cunaqabatayn ku soo rogtay madaxweynaha Syria iyo mas’uuliyiin kale
Washington:-Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa saxiixay amar fulin ah oo cunaqabatayn toos ah lagu saarayo madaxweynaha dalka Syria iyo lix kamid ah mas’uuliyiinta sar sare ee dowladda Syria kuwaasi oo ay Washington ku tilmaamtay in ay qeyb ka yihiin caburinta dhaqdhaqaaqyada looga soo horjeedo nidaamka Bashaar Al-asad.
Mas’uuliyiinta dowladda mareykanka ay cunaqabtaynta ku soo rogtay ayaa waxaa kamid ah Faaruuq Al-sharac oo ah madaxweyne kuxigeenka dalkaas Syria , Caadil Safar madaxa xukuumadda ,Maxed Ibraahim Al-shacaar wasiirka arrimaha gudaha, Cali Xabiib Maxamuud wasiirka gaashaandhiga, C/fataax Qudsi madaxa sirdoonka milateriga iyo Maxed Diib Seytuun madaxa amaanka siyaasada.
Aqalka cad mareykanka ayaa sheegay in qaraarkan uu kadhigan yahay dadaal cadaadis lagu saarayo xukuumadda Syria si ay u joojiso dhibaataynta shacabkeeda.
Bayaan ka soo baxay wasaaradda Khasnada mareykanka ayaa lagu sheegay in cunaqabtayntani ay kadhigan tahay fariin culus oo loo dirayo madaxweyne Asad iyo nidaamkiisa.
Ma aha markii ugu horeesay ay dowladda mareykanku cunaqabatyn ku soo rogto mas’uuliyiin katirsan maamulka dalka Syria.
Laba toddobaad ka hor dowladda mareykanka ayaa cunaqabtayn ku soo rogtay Maahir Al-asad oo ay walaalo yihiin madaxweyne Bashaar Al-asad iyo mas’uuliyiin kale.
Xoghayaha guud ee Golaha iskaashiga oo ka ambabaxay sanca
Sanca:- Xoghayaha guud ee golaha iskaashiga gacanka C/ladhiif Ziyaani ayaa ka ambabaxay magaalada Sanca iyadoo wax heshiis ah aan laga gaarin khilaafka u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka dalkaas Yemen.
Waxaa jirey warar sheegayey in ay suurtagal tahay in labada dhinac ay saxiixaan heshiis uu garwadeen ka yahay golaha iskaashiga Khaliijka kaasi oo dhigaya in madaxweyne Saalax uu si nabad ah ku wareejiyo maamulka.
Sidoo kale dublumaasiyiin mareykan iyo Yurubiyaan ah ayaa ka qeyb galay dhexdhexaadinta iyo in si nabad ah lagu dhameeyo khilaafka labada dhinac iyo in la dhageysto cabashooyinka shacabka iyo baahidooda.
Qodobada Heshiiskan ayaa waxaa kamid ah dhistaanka xukuumad midnimo qaran oo uu madax ka noqonayo xisbiga talada haya islamarkaana uu xisbigu qaato wasiiro muuqda iyo in madaxweyne Saalax la siiyo damaanad qaad cad oo ka badbaadinaya marka uu xilka wareejiyo in garsoorka la la tiigsado isaga iyo qoyskiisa iyo boqolaal kamid ah saraakiisha maamulkiisa.
Madaxweyne Saalax ayaa horey ugu adkeysanayey inuusan xilka ka degi doonin illaa wakhtigiisa ka dhamaanayo sanadka 2013, balse waxaa si hoose u socday waan waanta ay wadaan wadamada Khaliijka oo hada u muuqata in lagu guul dareystay in laga dhaadhiciyo Cali C/della Saalax inuu xilka ka dego, maadaama qodobada uu ku xiray Madaxweynaha saxiixa heshiiskan ay yihiin kuwo aan weli si buuxda aysan u ogolaan kooxaha mucaaridka.
Dhanka kale Mucaaridka Yemen ayaa ku kala qeybsan weli aqbalaada codsiga Madaxweynaha Yemen, ayadoo qaar kamid ah kacdoonka Yemen, ay doonayaan in Madaxweynaha maxkamad loo soo taago danbiyadaasi, halka kuwo kalena ay sheegayaan inaan la aamini karin waxa uu sheego Madaxweynaha sidaa darteedna diiday inay gor gortan noocaan ah la galaan.
Kuwait iyo Iran oo ku heshiiyey in xiriirkooda dib u soo celiyaan
Kuwait:- wasiirka arrimaha dibadda Iran ninka lagu magcaabo Cali Akbar Saalixi ayaa sheegay in Iran iyo Kuwait ay isku afgarteen in safiiradaooda dib u soo celiyaan si loo qaboojiyo qalalaasaha horseeday in xiriirka labada dal uu xumaado kadib markii ay maxakmad Kuwaiti ah ay xukuntay labo muwaadiniin Iraaniyiin ah oo lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin shabakad wax u basaasta dowladda Iran.
Mr Saalixi ayaa booqasho ku tagay magaalada Kuwait , halkkaasi oo uu kulan kula yeeshay guddoomiyaha golaha Umadda dalka Kuwait Jaasim Alqaraafi islamrkaana waxay isku afgarteen in si deg deg ah loo ambaqaado xiriirkii laba geesoodka ahaa ee u dhexeeyey labada dal.
Mar uu ka hadlayey saalixi muwaadiniinta Iiraaniyiinta ay dowladda Iran u xirxirtay howlo la xiriira basaasnimo waxa uu tilmaamay in dalkasta uu u madax banaan yahay ilaalinta xasiloonidiisa balse waxaan filayaa ayuu raaciyey in ay ku dhamaan doonto natiijo wax ku ool ah.
Mr saalixi ayaa ku gacan seeray cabsida dowladaha khaliijka ay ka qabaan dowladda Iran , wuxuuna sheegay in siyaasadda Iran ay tahay dalalka deriska ah xasilooni iyo degnaansho ay kula noolaato.
Booqashada Saalixi ayaa daba socoto booqasho uu ku soo maray labadii usbuuc ee la soo dhaafay dalalka Qadar, Imaaraatka, Cumaan iyo ciraaq .
Bayaan ka soo baxay safaaradda Iran ee dalka Kuwait ayaa lagu sheegay in Mr Saalixi uu la kulmi doono Amiirka Kuwait Sabaax Al-axmed Al-sabaax iyo dhigiisa Maxed Al-sabaax iyo mas’uuliyiin sar sare.
Kulankii Baarlamaanka dalka kuwait oo la isku Feeray buuq iyo fowdona ku soo dhamaaday
Kuwait:-Kulan ay xildhibaanada shiicada iyo sunniga dalka Kuwait ay ku yeesheen xarunta golaha Ummadda ee magaalda kuwait ayaa ku soo dhamaaday buuq, fowdo iyo gacan ka hadal.
Kulanka oo ujeedadiisu ay aheyd ka doodida xaaladda muwaadiniinta kuweytiyiinta ku xirxiran xabsiga Guantinamo Bay ayaa waxaa si kaftan ah uga hadlay mid kamid ah xildhibaanada shiicada oo lagu magcaabo Xuseen Alqalaaf oo sheegay in kuwa ku xiran xabsiga Guantinamo Bay in ay yihiin maleeshiyaat Alqaaacidda u shaqeeya.
Hadalka ka soo baxay xildhibaanka shiicada ayaa waxaa jawaab kulul ka bixiyey xildhibaan lagu magcaabo Jamcaan Al-xariish oo ah xildhibaan matala ururka Ikhwaanul Muslimiin ee dalka Kuwait kaas oo sheegay in fadhiga barlamanka looga hadlayo muwaadiniin kuweytiyaan ah oo kujira xabsiga Guantinamo balse aysan ahayn maleeshiyaat Al-qaacidda u shaqeeya.
Markii uu arinkaasi ka dhawaajiyay xildhibaanka ayaa mar qura hoolka waxaa is qabsaday buuq iyo saxmad waxaana faraha ka baxay koontaroolkii iyo qaab maamulkii shirka iyadoona xildhibaanada qaarkood ay bilaabeen qeylo iyo dagaal.
Gudoomiyaha golaha Umadda Kuwait Jaasim Alqaraafi ayaa markii ay xaalada halkaasi mareyso waxa uu ka dhawaajiyay in kulanka uu xiranyahay.
Fadhiga golaha Umadda dalka kuwait ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wafdi katirsan qareenada mareykanka kuwaasi oo u xilsaaran difaaca maxaabiista kuweytiyyinta ee ku jira xasbiga Guantinamo Bay.
Websiteka wikileaks ayaa marsii horeysay sheegay isagoo soo xiganaya safiirka mareykanka ee dalka Kuwait in wasiirka arrimaha gudaha kuwait Sheekh Jaabir Al-sabaax uu ugu baaqay dowladda mareykanka in ay dil toogasho ah ku fuliso kuweytiyiinta ku jira xabsiga Guantinamo Bay.
Xukuumadda Kuwait ayaa ku gacan seertay warbixintaas waxayna ku tilmaamtay in ay tahay mid aan sal iyo raad toona la heyn.